Ifowuni yakho ye-Android igcina indawo okuyo nokuba ikhubazekile | Zonke iinkonzo ze-intanethi
UGoogle unyanzelwe ukuba avume into ekudala iyimfihlo evulekileyo. Zonke iifowuni I-Android inokukhetha indawo, Abasebenzisi abanokuyikhubaza. Ngale ndlela, akunakwenzeka ukuba uGoogle azi ukuba siphi okanye senza ntoni. Yile nto besisoloko siyicinga. Nangona inyani ibonakala yahlukile.
Ibeyi lwenziwe uphando yi nxalenye Quartz. Kuyo kutyhilwa ukuba izixhobo zethu Android bayazi apho sikhona ngamaxesha onke. Ngawo onke amaxesha, naxa siyekise ukhetho lwasekhaya kwisixhobo sethu. Isenzo esinyanzelwe nguGoogle ukuba asamkele.
La Inkampani ibonile ukwenza olu hlobo lwezenzo. Nangona bekwathetha ukuba zange bazigcine iindawo zabasebenzisi. Into ebuzwa ngabaninzi. Kuba wonke umntu uyazi ukuba UGoogle uqokelela isixa esikhulu solwazi kubasebenzisi be-Android. Kodwa kule meko, iinkqubo ezithandabuzekayo zenkampani ziya kwelinye inyathelo.
Ukukhubaza iinkonzo zendawo yefowuni yethu akuthethi ukuba ifowuni yethu ayiqokeleli ulwazi ngayo. Into abayenzayo irekhoda indawo esekwe kwi-eriyali ekufutshane. Olu lwazi luthunyelwa kuGoogle kamva. Iyenzeka ngalo lonke ixesha isixhobo sethu se-Android singena kuluhlu lwe-eriyali entsha. Izixhobo ezixhumeke kwinethiwekhi ye-WiFi ziyachaphazeleka.
La indawo ayichanekanga kangako ezinje ngezo zifunyenwe ngeenkonzo zendawo. Nangona kunokwenzeka ukufumana indawo ngqo. Ingakumbi ezixekweni, apho ubukho bee-eriyali bukhulu kakhulu.
Ngokutsho Uphando, olu lwazi iqokelelwa ngenjongo yokuphucula isantya sokuhanjiswa kwemiyalezo. Nangona inkampani ingakhange ichaze ukuba i-eriyali ekufutshane inceda njani ukufezekisa oku. Eli nqaku libonakala liphunyeziwe kwangoko kulo nyaka. Baye baqinisekisa ukuba ayinanto yakwenza neenkonzo zendawo.
Kwakhona, umgaqo-nkqubo wabucala awuthethi ukuba olu lwazi lurekhodwe xa indawo ingasebenzi. Into ebakhathaza abaninzi, kuba kubonakala ngathi inkampani ifihla into. Babanga ukuba ulwazi lwalufihliwe kwaye alugcinwanga nangaliphi na ixesha, ukuzikhusela. UGoogle uceba ukuyiphelisa le nkqubo ekupheleni kwale nyanga ka-Novemba. Kanye ngeli xesha ngoku ukuba lo mkhuba utyhiliwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Khu seleko » Ifowuni yakho ye-Android iyayazi indawo okuyo nokuba ikhubazekile
Sele ndiqaphele. Siza kufumana ukubuyela umva ngenxa yokusetyenziswa kwezixhobo eziphathwayo.
Iintsuku ezingama-30 zomculo wasimahla kwiAmazon Music Unlimited kunye nee-Euro ezingama-10 oza kuzichitha kwiAmazon ukuba ungumsebenzisi ophambili